Ndi Ekirikiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị ga-ekwu okwu banyere otu n'ime igwe ojii dị elu site na mma, cirrus ma obu cirrus. Ha bụ igwe ojii dị iche iche n'ụdị filaments na-acha ọcha, ma ọ bụ na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha ọcha ọcha ma ọ bụ ìgwè. Igwe ojii a nwere ọdịdị anụ ahụ, yiri ntutu nke mmadụ, ma ọ bụ nke silky na-enwu ma ọ bụ nke njirimara abụọ n'otu oge.
Ihe mejupụtara ha pere mpe kristal kristal, ebe ọ bụ na e guzobere ha n'ogo dị elu (8-12Km.). Na ọkwa ndị a, ọnọdụ okpomọkụ sitere na -40º na -60ºC, nke mere na ikuku ikuku, nke nwere nnukwu mmiri nke alụlụ mmiri na nke a na-eme ka ọ dị mma, na-emepụta kristal ice kama mmiri mmiri. Ihe e kere eke nke igwe ojii a bụ n'ihi na kristal ndị a, nke ifufe dị ike na-ebugharị, nke na-emeri n'ọtụtụ dị elu, na-etolite ihe eji amata ihe ha ji apụta na mbara igwe. Kpachara anya ka ị ghara ịgbagwoju ha anya na Cirrostratus. Oge ikpeazu a na - eweputara halo.
Banyere ọnọdụ nke ihu igwe ha na ya, enwere ike ịsị na mgbe ha dịpụrụ adịpụ, ha bụ akara nke ihu igwe dị mma, mana ọ bụrụ na ha hazie nke ọma ma jiri nwayọ na-abawanye ruo na mbara igwe (dị ka foto) ha na-egosi ihe dị nso oge mgbanwe, ụfọdụ n’ihu ma ọ bụ squall. Versegafe na ifufe na-egosi iyi jet dị elu.
Anyị ga-enye ndụmọdụ ole na ole ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ chọrọ ịse ụdị igwe ojii a. Ikwesiri ịmara na ha na-enye ọkụ kacha mma na akụkụ 90º na anyanwụ. Jiri polarizing nyo iji mee ka ọcha nke Cirrus pụta ìhè ma gbaa ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ. Gụnye ederede ụwa. Mgbe anyanwụ dara, ụzarị anyanwụ dị n’okpuru na-eme, site na ntụgharị, Cirrus na-ebu ụzọ gbanye edo edo, mgbe ahụ oroma, mgbe ahụ ọbara ọbara, pink, ka ọ bụrụ isi awọ. Usoro a bụ kpọmkwem agbara na ọwụwa anyanwụ.
Na Cirrus, a na-akwanyere ha ùgwù 4 nkpuru (Fibratus, Uncinus, Spissatus na Floccus) na ụdị 4 (Intortus, Radiatus, Vertebratus na Duplicatus).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Ndị Cirrus
ma ọ bụrụ na ọ bụ akpụrụ akpụ site na ice kpụrụ ya ... gịnị kpatara na ọ naghị ada? akpụrụ akpụ
na cali, na Jenụwarị 11, 2016, e nwere cirrus cloud
Zaghachi RUBEN DARIO GALINDEZ PEDREROS